သစ္စာဖောက်ဆိုတဲ့တံဆိပ်အကပ်မခံနိုင်လို့ ခံဝန်လေးထိုးပြီး အိမ်မှာအေးဆေးပြန်နေမှာမဟုတ်ကြောင်း ပြတ်ပြတ်သားသားပြောလိုက်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု – Sport Gaber
June 24, 2021 - by Sports Gaber - LeaveaComment
အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္ပြားအၿပီး အႏုပညာရွင္ေတြမ်ားစြာဟာ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ ရပ္တည္ၿပီး ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးမွာ တက္တက္ႂကြႂကြပါဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အမွန္တရားဘက္ကေန ရပ္တည္ခဲ့တာေၾကာင့္ ၅၀၅(က)နဲ႔အမႈဖြင့္ခံထားရၿပီး ေရွာင္တိမ္းေနၾကတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြလည္းရွိသလို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြလည္းရွိၾကပါတယ္။
၅၀၅(က)နဲ႔အမႈဖြင့္ခံထားရတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြအေနနဲ႔ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအ​ေျခအေနေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး Speak outမလုပ္ေတာ့ဘဲ ခံဝန္ကတိထိုးရင္ ဖြင့္ထားတဲ့အမႈကို ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းေပးမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ လူမႈကြန္ယက္ထက္မွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာေနခဲ့ပါတယ္။
ရဲရဲရင့္ရင့္နဲ႔ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးမွာကိုယ္တိုင္ပါဝင္ခဲ့တဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္ၿဖိဳးသုကေတာ့ ၅၀၅(က)နဲ႔အမႈဖြင့္ခံထားရတာေၾကာင့္ ေဘးလြတ္ရာမွာေရွာင္တိမ္းေနခဲ့ပါတယ္။ ယခုမွာေတာ့ ပိုင္ၿဖိဳးသုဟာ ခံဝန္ကတိကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာဆိုလာခဲ့ပါတယ္။
သူမကေတာ့ သစၥာေဖာက္ဆိုတဲ့ တံဆိပ္အကပ္မခံႏိုင္ဘဲ အသက္ေပးသြားသူေတြ၊ေထာင္က်သြားသူေတြေၾကာင့္ ခံဝန္ကတိထိုးမွာမဟုတ္ေၾကာင္း ​ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္ထိ အမွန္တရားဘက္ကေန မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ေနၿပီး ခံယူခ်က္၊ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျပတ္သားတဲ့ သူမရဲ႕စိတ္ဓာတ္ကို ျပည္သူေတြက ခ်ီးက်ဴးေလးစားေနၾကပါတယ္။
သူမကေတာ့ ” ခံစားခ်က္ကိုဦးစားေပးခဲ့မိလို႔မွားသြားပါတယ္…လို႔ခံဝန္ေလးထိုးၿပီး အိမ္မွာေအးေဆးျပန္ေနရမယ္တဲ့လား….မိသားစုနဲ႔ျပန္ေတြ႕ရမယ္တဲ့လား…. အလုပ္ေတြျပန္လုပ္ရမယ္တဲ့လား….တစ္ခ်ိဳ႕ေတြအသက္ေတြေပးသြားၾကၿပီ… တစ္ခ်ိဳ႕ေတြ ေထာင္ထဲေရာက္ကုန္ၾကၿပီ….တစ္ခ်ိဳ႕ေတြအားလုံးကိုပစ္ခ်ထားခဲ့ၿပီးလက္နက္ေတြကိုင္ေနၾကရၿပီ….
သူတို႔ေတြအိမ္ျပန္လို႔မရၾကေတာ့ဘူး…မိသားစုနဲ႔လည္းကြဲကြာကုန္ၾကၿပီ သူတို႔ခ်စ္တဲ့အလုပ္‌ေတြလည္းလုပ္ခြင့္မရၾကေတာ့ဘူး အဲဒီ့လူေတြကိုငါရွက္တယ္ အျဖစ္မရွိသူဆိုတဲ့ဂုဏ္ပုဒ္‌နဲ႔တင္ငါ့အတြက္လုံေလာက္ပါၿပီ…သစၥာေဖာက္ဆိုတဲ့တံဆိပ္ေတာ့အကပ္မခံပါရေစနဲ႔ အေရးေတာ္ပုံမေအာင္မခ်င္းငါအိမ္မျပန္ဘူး “ဆိုၿပီး ေရးသားထားခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားအပြီး အနုပညာရှင်တွေများစွာဟာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ရပ်တည်ပြီး နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အမှန်တရားဘက်ကနေ ရပ်တည်ခဲ့တာကြောင့် ၅၀၅(က)နဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရပြီး ရှောင်တိမ်းနေကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေလည်းရှိသလို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေလည်းရှိကြပါတယ်။
၅၀၅(က)နဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့ လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Speak outမလုပ်တော့ဘဲ ခံဝန်ကတိထိုးရင် ဖွင့်ထားတဲ့အမှုကို ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာ ပျံ့နှံ့လာနေခဲ့ပါတယ်။
ရဲရဲရင့်ရင့်နဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့သရုပ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ ၅၀၅(က)နဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရတာကြောင့် ဘေးလွတ်ရာမှာရှောင်တိမ်းနေခဲ့ပါတယ်။ ယခုမှာတော့ ပိုင်ဖြိုးသုဟာ ခံဝန်ကတိကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြတ်ပြတ်သားသားပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်။
သူမကတော့ သစ္စာဖောက်ဆိုတဲ့ တံဆိပ်အကပ်မခံနိုင်ဘဲ အသက်ပေးသွားသူတွေ၊ထောင်ကျသွားသူတွေကြောင့် ခံဝန်ကတိထိုးမှာမဟုတ်ကြောင်း ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ယခုအချိန်ထိ အမှန်တရားဘက်ကနေ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်နေပြီး ခံယူချက်၊ဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားတဲ့ သူမရဲ့စိတ်ဓာတ်ကို ပြည်သူတွေက ချီးကျူးလေးစားနေကြပါတယ်။
သူမကတော့ ” ခံစားချက်ကိုဦးစားပေးခဲ့မိလို့မှားသွားပါတယ်…လို့ခံဝန်လေးထိုးပြီး အိမ်မှာအေးဆေးပြန်နေရမယ်တဲ့လား….မိသားစုနဲ့ပြန်တွေ့ရမယ်တဲ့လား…. အလုပ်တွေပြန်လုပ်ရမယ်တဲ့လား….တစ်ချို့တွေအသက်တွေပေးသွားကြပြီ… တစ်ချို့တွေ ထောင်ထဲရောက်ကုန်ကြပြီ….တစ်ချို့တွေအားလုံးကိုပစ်ချထားခဲ့ပြီးလက်နက်တွေကိုင်နေကြရပြီ….
သူတို့တွေအိမ်ပြန်လို့မရကြတော့ဘူး…မိသားစုနဲ့လည်းကွဲကွာကုန်ကြပြီ သူတို့ချစ်တဲ့အလုပ်‌တွေလည်းလုပ်ခွင့်မရကြတော့ဘူး အဲဒီ့လူတွေကိုငါရှက်တယ် အဖြစ်မရှိသူဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်‌နဲ့တင်ငါ့အတွက်လုံလောက်ပါပြီ…သစ္စာဖောက်ဆိုတဲ့တံဆိပ်တော့အကပ်မခံပါရစေနဲ့ အရေးတော်ပုံမအောင်မချင်းငါအိမ်မပြန်ဘူး “ဆိုပြီး ရေးသားထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Previous Article ချစ်သူကောင်မလေးရေနစ်တာကိုဆင်းကယ်ရင်း ရည်းစားဖြစ်သူကောင်လေးပါ ရေနစ်ခဲ့ပြီး ထိုဖြစ်စဉ်ကိုမြင်သည့် သူငယ်ချင်းတစ်ဦးကလိုက်လံကူညီကာ (၃)ဦးစလုံး ရေနှစ် သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ယနေ့တောင်ကြီးမြို့ကဖြစ်ရပ်
Next Article Covid 19 ကူးစက်ခံရပြီး ကူညီမယ့်သူမရှိတာကြောင့် လိုအပ်တာတွေကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ကာ Q ဝင်နေကြရှာတဲ့ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်